30 October , 2011 — Dilip Acharya
त्यसो त सन्त बहादुरको कान्छो छोरा समेत अहिले २० वर्ष नाघिसकेको छ र उसको सबैभन्दा जेठी छोरीको उमेर त चालीसको हाराहारीको छ । तर सन्त बहादुर ड्याडी भने भर्खरै भएको हो । कुरो बेमेल लागे पनि यथार्थ भने यस्तै छ ।
Posted in कथा-लघुकथा. 18 Comments »
18 Responses to “सन्त बहादुर पनि ड्याडी भएछ !”
30 October , 2011 at 5:30 pm
हामी कस्तो शिक्षित र सभ्य भइरहेका छौं, राम्रो उदाहरण हो ।
30 October , 2011 at 5:38 pm
शीर्षकमात्र पढेर एउटा भिन्नै कथावस्तुको अनुमान गरेर कथा पढ्न थालेको तर भित्र त अर्के पो रहेछ । जे होस् कथाकारको लेखनीलाई धन्यवाद ।
Palpali Milan Says:
30 October , 2011 at 5:50 pm
छोटो मिठो कथा
30 October , 2011 at 6:47 pm
30 October , 2011 at 7:07 pm
एकछिन त अन्तो न पत्तो सँग हराएँ । म त ड्याडी भनेको फेरि अर्कि ल्याएर होला भन्ने ठानेको ….तर कुरो अर्कै रहेछ….अनुमानै गर्न नसकिने….गज्जवको लेखनी!!!!
30 October , 2011 at 9:52 pm
म जोतारे धैब संग पूर्णत सहमत छु: हामी कस्तो शिक्षित र सभ्य भइरहेका छौं, राम्रो उदाहरण हो ।
2 November , 2011 at 1:54 pm
हाम्रा गाउँ तिर 'नि हर्के, मंगले, बिरे सबै ड्याडी भै सकेछन्। हिजोका आमाहरु सुन्तली, खिनौरीहरु नाकका फुली बुलाकी फालेर धमाधम मम्मी बन्दै छन् रे जे होस् विकसित त हुँदै छौँ नि हामी। घत् लाग्दो कथाको लागि धन्यवाद दिलीप सर!!!
7 November , 2011 at 11:01 pm
सुरुमा कथा को भाबमा केही अपुरो लगेता पनि अन्त्यमा कथाको भाब प्रस्ट भयो ,कथा यथार्थ मा छ ।
23 December , 2011 at 1:43 pm
दूर्जेय जी, म कमेन्ट डिलिट गर्दिन …त्यसमा पनि तपाईँको ???? मेरो त्यत्रो हिम्मत !!। मैले त तपाईँको सबै कमेन्ट देखिएकै ठान्छु…कुनै पोस्टको कमेन्ट नआएको भए कृपया खबर गर्नु होला (कहिलेकाहीँ सिस्टममा गडबड भएर तुरुन्तै कमेन्ट नदेखिन भने सक्छ है ।)।कमेन्टको लागि सबैमा धन्यावाद !
7 June , 2012 at 8:50 pm
मैले पहिले नै पढेको थिए सार्है राम्रो लागेको थियो। अझै पनि सन्दर्भिका र यथार्थ परक छ यो कथा। दिलीप सर यो समस्या हाम्रो देशमा सन्तेहरुको मात्रै हैन। यो भन्दा पनि बिजोग त विदेशमा छ। मैले एउटा पारिवारिक भेलामा नेपालीका छोरा छोरीलाई जम्मा गरेर केही कुराहरू सोधेको थिए, नेपालीमा गन्ती गर्न, कखरा भन्न र केही नेपाली शब्दहरूको जानकारीको बारेमा। यहाँ उच्च जीवन शैलीको नाममा, अग्रेजी भाषा मात्रै भाषा हो भन्ने जस्तो गरि आफ्ना नानीहरूलाई सिकाएको पाएको छु। तपाइ मान्नुस वा नमान्नुस १० जना मध्य एक जनाले मात्रै “बा” भनेको ड्याडी हो भनेर भने। नत्र, पापा, पापी(स्प्यानिस भाषा), ड्याडी, ड्याड् मात्रै प्रयोग गरेको पाएँ। भाषाको तोलो त यहाँ पो झारिएको छ त विदेशमा। घरमा सामान्य कुरा पनि नसिकाउदा, नेपाली भाषा पढ्न र लेख्नडको त कुरै छोडौं, बोल्न समेत नआउने भएका छन्। बोले भने पनि नेपाअग्रेजी। हुँदा हुँदै मैले कहिलेकाहीँ नजिकैका केटाकेटीहरू म सँग बोल्न आउँदा, हेर नानी हो म अग्रेजी बुझ्दिन, तिमीहरूले नेपालीमा भन है भन्न खोजेको कुरा, भन्दा अर्को दिनबाट उनीहरू मेरो नजिकै परेनन्। गाह्रो हुदै गएको छ नयाँ पीढीलाई नेपालमा र विदेशमा समेत।।।
Prahlad sanjel Says:
18 July , 2012 at 3:34 pm
19 January , 2013 at 12:39 pm
1 September , 2013 at 5:20 pm
ramro lagae tar maielae khojai ko jasto vaetin
suresh mahato Says:
1 September , 2013 at 5:21 pm
3 April , 2014 at 4:46 pm
BisHal mayalu nepal
22 July , 2015 at 4:09 pm
Agamya shiromani Says:
25 January , 2017 at 9:28 pm
आज को कार्यक्रम साहित्य संसार मा राखेको छु ।
5 September , 2017 at 5:45 am
Don’t put photos 👎👎👎👎👎👎👏👅👅